Muuqaal Boqol iyo lix qof oo tahriibayaal ah kaligay baa ka soo hadhay Warayisi MURUGO LEH
March 18th, 2019 Ruugcadaa
Waxaan hubaa muuqaalkan ama waraysigani in uu gudbinayo murogo baaxad leh, qofkasta oo muuqaalkan dawadaa waxaa markhaati madoon ah in uu wax badan ka heelayo dhibaaha socodka har jadka ah ee tahriibka.
2009 April ilaa 2019 wuxuu wadaa difaaca Badda Somalia.
March 14th, 2019 Ruugcadaa
Wuxuu ka qorey kumanaan qormo iyo codad uu duubey uu kaga hadley arintaan. Majirto cid mushaar ku siiso asaga Is xilqaamey. Maalin kaste dhoowr qoraal buu bartiisa Facebook page soo dhigaa fariin uu u diraayo Madaxda Somalida sida Madaxweynaha, Reysalwasaaraha iyo labadaba Aqal ee Baarlamaanka iyo guud ahaan Shacbiga Soomaaliyeed hadana loogama jawaabo Muwaadinka qoraalkiisa hantida Qaran uu ku difaacayo asna kama daalo.
March 13th, 2019 Ruugcadaa
Waa Barnaamij Suugaaneed Ay Inoo Wadaan Igarre Iyo Abwaan Baraako- Daawasho Wacan
March 12th, 2019 Ruugcadaa
Igarre Yaasiin oo ah madaalle Mar walba inoo soo bandhiga barnaamijyo dhaqan oo waxtar leh todobaadkana wuxuu inoo wadaa suugaanta kala gedgedisan ee Abwaan Baraako, oo rabbi hibo u siiyey Hal abuurnimo culus iyo luuq ay dhegahaagu ku raaxaysanayaan.
March 11th, 2019 Ruugcadaa
Ilhaan Oo Rabta Iney Falisto Yeekihi Ugu Dambeeyey Ee Gacnteeda Ku Jiray .. ilhaan Oo Markaan Tusmo Habaabsan Ayey Obama Ku Tilmaantay Inu Ahaa Dilaa Dhoola-cadeya
March 10th, 2019 Iftiinshe
Ilhaan Cumar oo ka mid ah Golaha aqalka hoose ee Mareykanka ayaa mar kale wajaheysa dagaal dhinaca afka ah oo ay kala kulmeyso xisbiga Dimuqraadiga ah ee ay ka tirsan tahay.
Ilhaanoo u muuqata Qof tusmo habaabsan isla markaana colaad ka abuuraneysa Buurti ay ku tiirsaneyd ayey si madax taag ah u cambaareysay Madaxweynihii hore ee Mareykanka Brack Obama oo ay ku sheegtay in uu ahaa dilaa dhoolla-caddeeya, taaso ay ka xumaadeen taageerayaashi Obama waxa ka soo yeeray ilhaan Cumar.
Kuuriyada Waqooyi ma waxa ay dib u billaabi rabtaa tijaabinta gantaallada?
Sawirro uu qaaday dayax gacmeed dulmaray xarun ku taal meel u dhow caasimadda Pyongyang ayaa muujinaya in Kuuriyada Waqooyi ay isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaal ama ay hawada sare u dirto satellite.
March 6th, 2019 Ruugcadaa
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu wehliyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa caawa soo gaaray magaalada Nairobi, halkaasi lagu wado in looga xaajoodo xiisadda diblomaasi ee salka ku haysa xuduudda badda ee ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya.
March 4th, 2019 Ruugcadaa
Igarre Iyo Shukri oo inoo wada barnaamij qosol iyo maad xambaarsan
Igarre Iyo cabdishukri waxay todobaadkan inoo wadaan mid ka mid ah barnaaminyada ay ugu talagaleen in ay bulshaweynta Soomaaliyeed la wadaagto, waana mid xambaarsan qosol iyo maad.
March 3rd, 2019 Ruugcadaa
Hees Qoraala oo ku Socota Cali Khalif oo hargeysa ku sugan
March 1st, 2019 Ruugcadaa
Markii aad loola yaabay midabaynta iyo isbedelidda cali khaliif galaydh, oo dadka in badani dareensanayeen inuu hoostaasi kala shaqaynayey maamul goboleedka somaliland, balse waxaa iska badnaa inta aamintay ee jeebkooda u furtay, aakhirkiina uu cidlada kaga dhaqaaqay, balse heestan loo tiriyey hoos u u fiiriya.
Abwaan Soomaaliyeed oo gabay qiiro leh ka tiriyey kufsigii waxashnimo
Igarre Yaasiin ayaan inoo diyaariyey barnaamij gaar ah oo uu ku waraysanayo abwaan Soomaaliyeed oo aad uga xumaaday dhibka iyo tacadiga lagu hayo haweenka kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba.
Barnaamij Ku Saabsan Ismaandhaafka Dhaqanka Igarre Iyo Shukri Maxaa Kala Qabsaday- VIDEO
February 24th, 2019 Ruugcadaa
Barnaamijkan maqal iyo muuqaalka ah oo ay inoo soo bandhigayaan Igarre iyo Yaasiin, wuxuu xambaarsan yahay ismaandhaafka bulshada miyiga iyo tan magaaladu markay is helaan, siday foodda isu daraan…
Dhaqashada Shinnida oo ku soo badanaysa gobolka Sool
February 21st, 2019 Ruugcadaa
Deegaano ka tirsan gobolka Sool waxaa ku soo badanaya Beeraha dhaqashada Shinnida kuwaa oo laga hirgaliyey beeraha ka baxsan magaalada Laascaanood Dhaqashada Shinidda taas oo laga helo Malab saafi ah oo ay intabadan dadka ku nool magaalada Laascaanood ay si weyn ugu kaaftoomeen Malabka Macmalka ahaa ee laga keeni jiray Dibadda iyo deegaanada ka baxsan gobolka Sool .
February 20th, 2019 Ruugcadaa
Horgale Galaydh Oo Loo Sii Kaxaysanayo Adis-ababa
February 19th, 2019 Ruugcadaa
Wararka aanu ka helayno magaalada Hargeysa waxay sheegayaan horgale galaydh in loogu yeedhay inuu Muuse Biixi u sii raaco la kulanka madaxweynaha sharciga ah ee soomaaliya Mudane Farmaajo, oo ku yar hakanaya Adis Ababa….
Barnaamij ay inoo wadaan Igarre iyo Ansal, waana mid xambaarsan Maahmaahyo sadexleey ah
Barnaamijkan waxaa si talantaali ah Isugu dhiibdhiibaya Igarre iyo Ansal waxaanay inoo soo bandhigayaan maahmaahyada Soomaaliyeed ee sadexleeyda ah amaba sadex shubka u dhaca, mucda iyo murtidana xambaarsan.
Qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya oo gabi ahaanba la joojiyay
Ganacsatada Qaadka Keena Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen gabi ahaanba jaadkii ay ka keeni jireen dalka Kenya, kadib markii shalay ganacsatada Qaadka Kenya ay sheegeen inay joojin doonaan Qaadka ay keenaan Soomaaliya.
February 18th, 2019 Ruugcadaa
WAR-SAXAAFADEED ka soo baxay dawlada federaalka soomaaliya
February 17th, 2019 Ruugcadaa
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo ka jawaabeysa war-saxaafadeed ka soo baxay Dowladda Kenya 16kii Febraayo 2019, oo iyadu qaadatay go’aamo degdeg ah oo aanay si miyirqab ah uga baaraandegin, misana dawlada federaalku waxay caddeyneysaa:
February 17th, 2019 Iftiinshe
Horgale Cali Khalif Galaydh Oo Soo Gaadhay Dubaay
February 16th, 2019 Ruugcadaa
Waxaa magaalada Dubai soo gaadhay Horgale Cali Khalif Galaydh oo u sii socda dhankaasi iyo magaalada hargeysa, oo ay ku sugayaan hadhaagii awalba jeebka ugu jirey, muxuu u socdaa, yaase u yeedhay, maxaase loogu yeedhay?!!!
Dowlada Soomaaliya oo Ansixisay Qorshaha Tababarada Turkiga ay Ka wadaan soomaaliya
February 16th, 2019 Iftiinshe
Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen waxa ay ku meel mariyeen Heshiiska Tababarrada Ciidamada ee ay horay u kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya Iyo TurkigaWasiirrada xukuumadda ee kulanka goob joogga ahaa ayaa dood kadib waxa ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen heshiiska oo horay wasaaradda difaaca dalku ay ugu soo gudbisay golaha wasiirrada si loo dardar-geliyo qorshaha dawladda Turkigu ay ku tababarayso ciidanka xoogga dalka.
Weerarka Pulwama: Hindiya waxay gabi ahaanba “go’doon” galin doontaa Pakistan
Hindiya ayaa sheegtay in ay go’doon dhammaystiran galinayso dalka Pakistan kadib markii qof isasoo miidaamiyey uu 46 Askari ku dilay gobolka ay Hindiya maamusho ee Kashmir.
Admiral Faarax Qare oo Soomaalida ugu bishaareeyay inay Kenya uga guuleysanayaan dacwadda Badda
Admiral Faarax Axmed Cumar (Faarax Qare) oo horay u ahaa taliyaha ciidamada badda isla markaana ah guddoomiya hay’adda cilmiga badaha Soomaaliya ayaa Soomaalida ugu bishaareeyay inay uga guuleysanayaan Kenya muranka badda ee xuduudka dhinaca badda.